मह - यो एउटा अचम्मको उत्पादन हो यो एक असामान्य स्वाद छ र शरीर ठूलो लाभ हो किनभने। यी2गुण संयोजन गर्न सक्ने धेरै छैन घटक खाना पकाउने मा सहमत।
मह व्यापक जीवनको धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी, यो वैकल्पिक चिकित्सा अपरिहार्य मानिन्छ: प्रतिरक्षा बढाउँछ, घर मा तयार लागूऔषधको सेट अभिन्न भाग हो। साथै, मह अवश्य गर्ने विभिन्न आहार पकड को बालिका छ। शरीर मा आफ्नो हात संग त विशेष गरी वसन्त घटी छन् जो थप पोषक, हुन्छ।
खाना पकाउन र बोल्न सक्नुहुन्न बारेमा। किनभने मह प्रत्येक तेस्रो मिठाई नुस्खा पाउन सकिन्छ। खाना पकाउने बेलामा अक्सर उत्पादन को सूचित ग्राम छ, र कसरी विपरित मात्रा मा धेरै र भन्न गर्दैन। तर यति कडा एकै नजरमा निर्धारण: मह कति ग्राम चमचा मा? किनभने सबैलाई एक भान्सा मात्रा किन्न मौका छ यो, Housewives लागि असुविधाको धेरै सिर्जना गर्छ।
: स्थिति अन्य उत्पादनहरु संग समान छ को एक चम्मच चीनी को एक चमचा, धेरै ग्राम वजन कसरी यी उत्पादनहरु अर्को अनुच्छेद पढेर पाउन सकिन्छ - वनस्पति तेल, मह एक चमचा। यो तपाईं लोकप्रिय उत्पादनहरु देखाउँछ किनभने यस्तो "धोखा पाना" पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री को माध्यम ले, समस्या बिना पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ।
, ग्राम कसरी यति धेरै मह र अन्य उत्पादनहरु को चमचा?
धुलो चिनी - '25
साल्ट - 20 ग्राम
सोडा - '23
ड्राई खमीर - '11
मह - '22
दालचिनी - '15
जमीन कफी - '18
Granulated gelatin - '15
कोको - '25
साइट्रिक एसिड क्रिस्टल - '16
सिरका - '18
वनस्पति तेल र पग्लियो margarine - '15
सारा दूध - 18 ग्राम
खट्टा क्रीम - 20 ग्राम
अक्सर स्वादिष्ट कुरा पकाउन जम्मा, तपाईं आवश्यक सामाग्री को सबै भान्सा मा छन् कि पाउन। पसलमा पहिले नै लेट चलिरहेको छ भने (पकाने प्रक्रियाको शुरुवात), यो अन्य, समान organoleptic गुण को छुटेको घटक प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ।
यसरी, सघन मह धेरै ग्राम राखिएको छ कसरी चमचा, त्यसैले धेरै चिनी। 1 लीटर प्रतिस्थापन सारा दूध 100 एमएल वा गाढा दूध को पाउडर को 400 G हुन सक्छ। रम सार 10 G - बरु किलोग्राम गुड पाक 760 ग्राम चिनी, ब्रान्डी र रम को सट्टा 100 ग्राम थप्न दिनुभयो।
हाल समयमा, तपाईं सोया आटा को वाहेक संग नुस्खा मा वस्तु पाउन सक्नुहुन्छ। केही कारण लागि पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री यसलाई थप्न छैन निर्णय भने, तपाईं यो उत्पादन नै रकम मा साधारण गहुँको पीठो प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
त्यसैले, मह एक चम्मच कति ग्राम वजन? यो प्रश्नको जवाफ - तल सूचीमा।
चीनी -5G
धुलो चिनी - 8 ग्राम
साल्ट -9G
सोडा -6G
ड्राई खमीर - 2.5 G
मह - '12
दालचिनी - 8 ग्राम
जमीन कफी -7G
Granulated gelatin - 8 ग्राम
कोको -9G
साइट्रिक एसिड क्रिस्टल -7G
सिरका -5G
वनस्पति तेल र पग्लियो margarine -5G
सारा दूध -5G
खट्टा क्रीम -9G
अक्सर पकाउने प्रयोग गरिन्छ कि उत्पादनहरु त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। र निर्धारण गर्न मा एक चमचा मह कति ग्राम, बस नांद हेर्न। तर के केही कारणले सूचीबद्ध छैन जो अन्य घटक बारेमा?
अनुमानित तौल निम्न डाटा आधारमा हिसाब गर्न सकिन्छ: उत्पादनको 10 बीच र 25 ग्राम एक चम्मच। एक लाइटर उत्पादन संग पदार्थ को मात्रा र वजन तुलना गर्न सिल प्याक मा आवश्यक छ रूपमा सही यस्तो जानकारी निर्धारण गर्न। उदाहरणका लागि, चीनी र धुलो चिनी लागि। यी उत्पादनहरु नै वजन रकम प्रत्येक अन्य देखि धेरै फरक हुँदा। तदनुसार, चमचा पहिलो घटक उत्तरार्द्ध भन्दा वजन मा सानो हुन्छ।
अब बाटो मा जवान mistresses कुनै अवरोध छन्। आखिर, यस्तो "धोखा पाना" तपाईंलाई चाँडै मह कति ग्राम चमचा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिभा मा - पकाउने कला को ठूलो मालिकको व्यापक पकवान को सफलता उत्पादनहरु गुणस्तर, को निर्धारण को विशुद्धता को 20%, र बाँकी 40% मा 40% निर्भर छ कि विश्वास छ।
Canapés लागि के सेट गरिएको छ? canapés बनाउन लागि सेट
"रूसी आलु" (चिप्स): संरचना, तस्बिर, समीक्षा, क्यालोरी
पाइन मह - यो के हो? को पाइन मह कसरी निर्धारण गर्ने?
Urbech - यो के हो? उपयोगी गुण र आवेदन
ड्राई नास्ता: खाना वा खान छैन?
क्यालोरी पीठो प्रजातिहरू, उपयोगी र हानिकारक गुण
घर मा मिट्टी को एक मोडेलिंग: एक मास्टर वर्ग र फोटो
सुरिनाम राजधानी - पारामारिबो
लरेन मिलर: जीवनी र Filmography
बच्चाहरु को लागि Nurofen
बहुमुखी र प्रभावकारी आहार पूरक "Yogulakt": उपभोक्ता समीक्षा र सिफारिसहरू
स्वर्गदूतहरूको मूर्तिहरू: इतिहास र रोचक तथ्य को एक समीक्षा
रूपमा आमाबाबुले यो मामिला भनिन्छ? Zaur नाम: प्रकृति र भाग्य
सबैभन्दा शरीर शुद्धीकरण विधि को प्रसिद्ध - को आंत्र शुद्ध गर्न Enema
पोर्क - पागलपन स्वाद!